Hayso “trac” of horumar noo
December 11, 2009 by dalabyo Leave a Comment
Hello ay jiraan,
Habka ugu fiican si loo horumariyo waa iyadoo la kaashanayo beesha, oo waxaan rabay in aan qof walba ha ogaado sida wax u socdaan iyo waxa sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah in la socotid waxa aan samaynayno.
Haddii aad tahay user oo aad rabto in aad u hesho taageero degdeg ah oo la ogeysiiyaa oo ku saabsan dhacdooyinka cusub, si xor ah ku noo raaci twitter.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah uga qeybqaataan bulshada, doonayaan in ay ku caawiyaan dadka kale oo ku faana oo aad goobta isticmaalaya transposh, aan hadda haysanno bog on facebook.
Haddii aad rabto in aad ogaato waxa ku dhiirigelinayaan in waxa ay samaynayaan, ogaato oo ku saabsan soo socda muuqaalada hor inta aan la sii daayay iyo guud ahaan jecel yihiin in ay ku noolaadaan qarkii, raacaan goobta trac noo trac RSS.
Haddii aad rabto inaad raacdo go'aaanka on this site, Astaanta RSS ka (ama ka hooseeya ama aad line cinwaanka browser) waa saaxiibkaa. Waxaad heli doontaa cunto oo luqad ee aad hadda isticmaashid.
Comments yihiin had iyo jeer aad u aqbalay (oo waxaannu isku daynaa in ay dib u helaan sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodno). Haddii aad qabto kale talooyin / fikradaha / Talooyin / horyaal post digtoonaan – kaliya noo soo sheeg.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: facebook, rss, bulsho, trac, twitter
Changeset in Transposh-WordPress [c4740c0]: Haa, waa in aan dib u counters wakiil yandex aad on isbedel. December 5, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [2fb9f69]: WordPress 5 isticmaalaa Conciliation json to post alaab, waa in aynaan isku dayin in aad ... November 23, 2018
Changeset in Transposh-WordPress : PHP 7.2 create_function deprecated, sidaas darteed hadda waa qarsoodi ah ... November 23, 2018
Changeset in Transposh-WordPress : PHP 7.3 leedahay hab ka duwan in - char ee tibaaxaha preg, sidaas ... November 23, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [d4911aa]: Bing daray Telugu November 23, 2018
dalabyo on Version 1.0.3 – Waa maxay sababta ma waxaad ii soo diray farriin?
Fabio on Version 1.0.3 – Waa maxay sababta ma waxaad ii soo diray farriin?
badda ballaadhan on Version 1.0.0 – Wakhtigii waa yimid